कोरोना बढेपछि दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यु ! « News24 : Premium News Channel
कोरोना बढेपछि दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यु !
काठमाडौँ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजबाट रात्रिकालीन कफ्र्यु लगाइएको छ । त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण निरन्तर बढ्न थालेपछि दिल्ली राज्य सरकारले आज सोमबारबाट रात्रिकालीन कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरेको हो ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिअन्टसँग सम्बन्धित घटनाहरु बढेपछि कफ्र्यु घोषणा गरिएको हो । दिल्ली सरकारले हरेक दिन राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा दिल्लीमा २९० जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । दिल्लीमा उक्त सङ्ख्या पछिल्लो ६ महिनायताकै सर्वाधिक भएको बताइएको छ । थप संक्रमण फैलन नदिन दिल्ली सरकारले प्रतिबन्धात्मक कार्यहरु थालेको हो ।
भारतभर पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ७ हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । संक्रमण रोक्न दिल्लीबाहेक अरू कैयौँ भारतीय राज्यले पनि रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन् । साथै मानिसहरूलाई भेला तथा समारोह गर्न समे निषेध गरिरहेका छन् ।